PAINT CARE | Steadfast Trading | Apex Auto Body Shop
# 05600, 16 oz. / # 05632, 32 oz. / #05664, 64 oz.
သန့်စင်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတို့ကို ဘက်ညီစေရန် ဖန်တီးထားသည့် ဤကားဆေးကြောရည်ဖြင့် ဖယောင်းအား မထိခိုက်စေပဲ ကားကို အပြည့်အ၀ဆေးကြောသန့်စင်နိုင်သည်။ သာမန်ဆပ်ပြာရည်နှင့် ပန်ကန်ဆေးဆပ်ပြာတို့သည် ထိခိုက်စေသည်။ အားကောင်းသည့် ဤဆေးကြောရည်သည် ဖုန်၊ ပိုမွှား၊ ငှက်ချေးများနှင့် အခြားအညစ်အကြေးများကို ဖယောင်းနှင့်ဆေးသားတို့ကို မထိခိုက်စေပဲ ဖယ်ရှားပေးသည့် အပြင် ရေကွက်၊ ရေပြောက်များ မဖြစ်ပေါ်အောင် တာဆီးပေးသည်။
# 05701, 16 oz. အရည် / # 05500, 12 oz. အပျစ်
Mothers ၏ Brazilian Carnauba Cleaner Wax သန့်စင်ပေးသည့် ဖယောင်းကို ဆေးသားရေရှည်ခံရေး အတွက် တစ်ဆင့်တည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းကို တစ်ကြိမ်အသုံးပြုရုံဖြင့် သန့်စင်ပေးပြီး ကာကွယ်ပေးရန်ဖန်တီးထားသည်။
Pure Brazilian Carnauba Wax အတွက် အသုံးပြုသည့် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး အ၀ါရောင်ကာနာဘူးဝါအဆီကိုပင် အသုံးပြုထားပြီး ၄င်းကို အပျော့စား ပေါလစ်တစ်မျိုးနှင့် ရောစပ်ထားသည့်အတွက် အသေးအဖွဲအားနည်းချက်များကို ပြေပျစ်သွားစေပြီး ဆေးသား ကို တလက်လက်တောက်ပစေသည်။ ၄င်းသည် အထူးသဖြင့် ဖိုင်ဘာဂလပ်စ်နှင့် ဂျဲလ်အလွှာများတွင် အထူး ထိရောက်မှုရှိသည်။
၁၆ အောင်စရှိ Showtime Instant Detiler၊
၁၅ ပတ်လည်ရှိ Microfiber Towel တို့ပါဝင်သည်။
ဆေးကြောခြင်း၊ ပေါလစ်တိုက်ခြင်းတို့ဖြင့် မဖယ်ရှားနိုင်သည့် အလွန်သေးငယ်သည့် အမှိုက်သရိုက်များနှင့် ညစ်ညမ်းစေသည့် အရာများကို ဖယ်ရှားရန် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသေနစ်ဖြစ်သည့် ဤရွှံ့ခဲများသည် နစ်မြုပ်ဝင်နေသည့် သတ္တုအမှုန်များ၊ သစ်စေးများ၊ လေတွင်ပါလာသည့် ပတ်ဝန်ကျင်မှ ပို့ချအမှိုက်များနှင့် မှုတ်ဆေးစွန်းပေမှုများးကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ အားစိုက်အသုံးပြုရန် မလိုသည့်အပြင် ဆေးသားကို ထိခိုက် ခြင်းမရှိစေပဲ အညစ်အကြေးကိုသာ ရွေးချယ်ဖယ်ရှားပေးသည်။
# 05674, 64 oz.
Mothers ၏ Carnauba ဆေးကြောဖယောင်းတင်ဆေးသည် သင့်ကား၏ဆေးသားကို သန့်စင်စေရန်၊ တောက်ပစေရန်နှင့် ကာကွယ်ပေးရန် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။ ပုံမှန်ဖယောင်းတင်ခြင်း များအကြား ၄င်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် စွဲကပ်နေသည့် ဖုန်နှင့်အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှာပေးပြီး လက်ရှိ ဖယောင်းကို အထောက်အကူပေးသည်။ စွမ်းအားကောင်းပြီး အမြှုပ်ထွက်ကာ pH မျှတသည့် ဤဖယောင်း သည် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေပဲ အလွယ်တကူ ရေဆေးချနိုင်သည်။